किन जित्छ सधैँ जर्मनी ? - खेलकुद - नेपाल
जितको रहस्य– सशक्त युथ फुटबल
‘फुटबल एउटा यस्तो खेल हो, जसमा २२ खेलाडी एउटै बलका पछि कुद्छन् र अन्त्यमा सधैँ जर्मनीले जित्छ ।’ सन् १९९० को विश्वकपको सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग पेनाल्टीमा हारेपछि इंग्ल्यान्डका ग्यारी लिनेकरले दिएको प्रतिक्रिया हो यो । १८ असारमा फिफा कन्फेडेरेसन कपको उपाधि जर्मनीले जितेपछि यो भनाइ एकपटक फेरि सार्थक बनेकोे छ ।
ग्यारी लिनेकरले भनेजस्तै विश्व फुटबलमा जर्मनीको टिमले सधैँराम्रो नतिजा ल्याएको छ । जुनसुकै प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि दाबेदारको सूचीमा जर्मनी तल होला तर अन्त्यमा जर्मनीले जित्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । नपत्याए, प्रमुख प्रतियोगितामा उसको प्रदर्शन हेर्नाेस् । पछिल्लो चार विश्वकप र तीन युरोकपमा जर्मनी सेमिफाइनलमा पुगेको छ । समग्रमा जर्मनीले विश्वकपमा ११ पटक र युरोकपमा नौपटक सेमिफाइनल खेलेको छ ।
जर्मनी फुटबलको महाशक्ति हो । यो प्रमुख प्रतियोगितामा उसको प्रदर्शनले सिद्ध गरिसकेको छ । तर, जर्मनीबाट पलभरमै एकल प्रयासमा टिमलाई जिताउन सक्ने जादुयी खेलाडी बिरलै निस्किएका होलान् । ऊबेलाका पेले, म्याराडोना वा अहिलेका मेसी, रोनाल्डो वा नेयमारजस्ता । जादुयी खेलाडी नभए पनि सधैँ एकरुपको परिणाम कसरी निकाल्छ जर्मनीले ? आखिर कसरी जित्यो जर्मनीले ? हरेक खेलपछि विपक्षी टिमका समर्थकले यस्तै प्रश्न गर्छन् ।
जर्मन भाषामा उनीहरूको राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई ‘डाई मान्च्साप्mट’ भनिन्छ । किन जित्छ जर्मनीले भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरूको यही उपनाममा छ । डाई मान्च्साप्mटको अर्थ हो, ‘द टिम’ । व्यक्तिगत रुपमा प्रत्येक खेलाडीले जस्तोसुकै खेलून् तर एक टिमका रुपमा जर्मनीले सधैँ राम्रो खेलेको छ । कन्फेडेरेसन कपको उपाधि पनि जर्मनीले कुनै एक खेलाडीकै कारण जितेको होइन । टिमका रुपमा उसको समग्र प्रदर्शन विपक्षीको भन्दा राम्रो थियो । सेमिफाइनलमा मेक्सिको र फाइनलमा चिली खेलमा हाबी देखिए पनि पाएको मौका सदुपयोग र गल्ती कम गर्नेमा जर्मनी नै अघि थियो ।
जर्मनीका लागि अहिले जितेको कन्फेडेरेसन कपको उपाधिले विशेष महŒव बोकेको छ । किनभने अन्तरमहादेशीय कपमा जर्र्मनीका लागि यो पहिलो उपाधि हो । र, म्यानुअल नोयर, म्याट ह्युमेल्स, जेरोम बोटेङ, टोनी क्रुस, मेसुट ओजिल लगायत अन्य मुख्य खेलाडीबिनै जर्मनीले जित्यो । नयाँ र कम अनुभवी टिम भए पनि आखिर यसमा अन्य प्रतियोगितामा जस्तै भयो । दाबेदार कोही अरू थियो होला तर जित्यो जर्मनीले ।
विश्व फुटबलमा प्रमुख प्रतियोगितामा जर्मनीले लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्नु पछाडि त्यहाँको फुटबल संघको र व्यावसायिक क्लबको ठूलो मिहिनेत लुकेको छ । प्रतिभाशाली युवा खेलाडी उत्पादनका लागि मात्रै त्यहाँ वर्षेनी एक अर्ब ५० करोड युरोभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ । राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न युवा परियोजनाको महत्व जर्मनीले सन् १९९८ को विश्वकप र सन् २००० को युरोकपमा असफल भएपछि मात्रै बुझेको थियो । त्यतिबेलै जर्मन फुटबल संघले स्थानीय तहमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर ११-१२ वर्षका नयाँ प्रतिभा खोज्न थाल्यो । बिस्तारै यसमा जर्मन बुन्डेसलिगाका सबै १८ क्लब जोडिए । र, उनीहरूले पनि युवा खेलाडीमा लगानी बढाउन थाले ।
जर्मनीमा अहिले व्यावसायिक लिगको (बुन्डेसलिगा) तीन तह छ । व्यावसायिक लिग खेल्ने सबै क्लबमा ‘क’ वर्गका लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक हुनु अनिवार्य छ । बुन्डेसलिगा खेल्ने सबै क्लबको छुट्टै यू–२१ र यू–१७ टिम हुन्छ । २००७ यता यू–१७ को छुट्टै व्यावसायिक लिग पनि सुरु भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा आप्mनै लिग छन् । जसको बुन्डेसलिगा क्लबसम्म राम्रै पहुँच छ । यसरी स्थानीय तहमा युवा र नयाँ प्रतिभा भेटिए, उनीहरूलाई थप प्रशिक्षण दिएर व्यावसायिक बनाउन त्यहाँ निकै प्रभावकारी प्रक्रिया छ । अहिले राष्ट्रिय टिममा रहेका प्रतिभाशाली खेलाडी यही प्रक्रियाबाट आएका हुन् । व्यावसायिकताको दृष्टिमा बुन्डेसलिगाभन्दा इङ्ल्यान्डको प्रिमियर लिग र स्पेनको लालिगा पनि कम छैन । तर, जर्मनीको जस्तो सशक्त युथ फुटबल अरू देशमा छैन ।
२० वर्षअघि जर्मनीको टिममा निकै बलिया र फुर्तिला खेलाडी हुन्थे । युवा परियोजना सुरु भएपछि प्रतिभाशाली खेलाडी आउन थाले । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाका जस्तै जर्मनीमा कुशल खेलाडी नभए पनि फुटबलको प्राविधिक पक्षका बारेमा जानकार खेलाडी छन् । यो पनि त्यहाँ व्यावसायिक फुटबलमा आएको सुधारले दिलाएको उपलब्धि हो । र, अहिले मेसुट ओजिल, मारियो गोड्जे, मार्को रुइस र जुलियन ड्रयाक्सलरजस्ता प्लेमेकर पनि निस्कन थालेका छन् ।
१५ वर्षयता जर्मनीको सफलताको प्रमुख हतियार हुन्, उसका प्रतिभावान युवा खेलाडी । टिममा युवा खेलाडीको बाहुल्य बढाउने नीति सबैभन्दा पहिले योर्जेन क्लिन्समेनले ल्याएका थिए । २००६ को विश्वकपमा उनकै सहयोगी भएर काम गरेका अहिलेका प्रशिक्षक लोले पनि यही नीति अपनाइरहेका छन् । उनी हरेक प्रतियोगिताअघि युवा प्रतिभा खोज्न लागिपर्छन् । अर्को वर्ष हुने विश्वकपका लागि राम्रो टिम तयार गर्नकै लागि उनले अन्तरमहादेशीय कपमा पूरै युवा टिम उतारेका हुन् ।
कन्फेडेरेसन कप जितेको जर्मन टिमको औसत उमेर मात्रै २४ वर्ष छ । ती खेलाडीहरूले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नका लागि मात्रै १५-२० दिन सँगै प्रशिक्षण गरेका थिए । तर, व्यावसायिक खेलमा भने उनीहरूको अनुभव अन्य टिमको भन्दा कम थिएन । र, यसको श्रेय पनि उनीहरूको घरेलु सरंचनालाई नै जान्छ । कन्फेडेरेसन कपअघि राष्ट्रिय टिमबाट कुल दुई सय खेल पनि नखेलेका जर्मन खेलाडीले विभिन्न व्यावसायिक क्लबबाट दुई हजारभन्दा बढी खेल खेलेका छन् । जर्मन टिमको पछिल्लो सफलताको आधार पनि यही हो ।
कन्फेडेरेसन कप जित्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि जर्मनीको २१ वर्षमुनिको टिमले यू–२१ युरोकप पनि जितेको छ । कन्फेडरेसन कप जित्ने टिमका आठ खेलाडी यू–२१ टिमका लागि पनि खेल्नयोग्य थिए । यसको मतलब यू–२१ युरोकप जित्दा पनि जर्मनीले आप्mनो मुख्य टिम प्रयोग गरेन । युवा खेलाडीले दिलाएका पछिल्ला यी दुई सफलताले अबको १०-१२ वर्षसम्म पनि जर्मन टिममा प्रतिभाशाली खेलाडीको कुनै कमी नरहने र नतिजा पनि ग्यारी लिनेकरको त्यही भनाइलाई सार्थक देखाउने खालको नहोला भन्न सकिँदैन ।